Kstars 3.2.2 ikozvino yavapo, ine zvigadziriso uye ikozvino chete zvee64bits | Linux Vakapindwa muropa
Kstars 3.2.2 ikozvino yavapo, ine zvigadziriso uye ikozvino chete zvee64bits
Pakati pekushandisa kwakamutsa kuda kuziva kwangu kwakanyanya kune mapuraneti. Rudzi urwu rwekushandisa runotipa ruzivo nezve mapuraneti, nyeredzi, nezvimwe, nezvakawanda zvakawanda zvekuti tinogona kushandisa maawa pamberi pavo. Iyo KDE Nharaunda chikumbiro iri kstars, imba yemapuraneti iyo inowanikwa yeLinux, pamwe nemamwe maviri anonyanya kushandiswa desktop desktop masisitimu: macOS uye Windows. KDE akakanda nhasi vhezheni itsva, kunyanya Kstars 3.2.2.
Kstars 3.2.2 yakaburitswa zvakanyanya kugadzirisa bugs, asiwo kuwedzera mashoma mashandiro atinozo tsanangura mushure mekucheka. Zvakare mushure mekucheka isu tinokuratidza maitiro ekuisa Kstars paLinux, kwete usati watanga kutaura kuti iri muAPT vhezheni kubva kune yepamutemo Ubuntu repositori (iine mawoko akanaka ekutsamira) uye mune Snap package ine zvese zvaunoda mukati pasuru imwechete. Zvinoita sekunge zvakakosha kutaura kuti iyo Snap vhezheni, inopesana neizvo zvaunofanira kutarisira, yapfuura yechinyakare kupfuura iyo APT vhezheni.
1 Kstars 3.2.2 ikozvino yave kuwanikwa yeLinux, macOS uye Windows
1.1 Chii chitsva mushanduro iyi
Kstars 3.2.2 ikozvino yave kuwanikwa yeLinux, macOS uye Windows
Tinogona kuisa Kstars kuburikidza neterminal kana kubva kune software centre. Kubva kune software centre, chingotsvaga "Kstars" uye gadza chirongwa. Kana isu tichida kuzviita kuburikidza neterminal tichazviita nemirairo iyi:
] sudo snap yekuisa kstars
sudo apt kuisa kstars
Chii chitsva mushanduro iyi
Yakakosha kugadzikana kugadzirisa kwekuvharwa kunotaurwa neFITS Viewer.
Regedza Kutenderera kweVhidhiyo kana uchitungamira kuburikidza nePHD2 ine vhidhiyo chishandiso.
Otomatiki syncing yezvishandiso zvishandiso pakutanga.
Kugadzirisa mune chiito cheflip.
GUI parameter inochengeterwa mudhiraivhi uye inobatwa ichienderana nesarudzo yemutsetse.
Kana bhuku remanyorerwo rikaonekwa, mushandisi anobvunzwa kana kuti achinje firita uye kugadzirisa mutyairi zvinoenderana
Yakagadzirisa firita yechinhu chewatch runyorwa rwewadhi nenguva uye nekukwirisa uye ndokuunza paramende yekuvhara uko mushandisi anogona kudzora muzana.
Yakagadziridzwa kuchengetedza kwegadziriro mune ese Ekos ma module.
Iwe une rumwe ruzivo rwakadzama mu ichi chimwe chinyorwa yakanyorwa nemumwe wangu David munaKurume. Wakamboedza Kstars? Ko izvi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Kstars 3.2.2 ikozvino yavapo, ine zvigadziriso uye ikozvino chete zvee64bits
Red Hat OpenShift Container Platform Yakasarudzwa ne1000 + Makambani Pasi Pose